ပြောင်းပါ။ ပြောင်းလဲရန်ရဲဝံ့ - Chip and Dan Heath (အသံ) - Afrikhepri Fondation
ပြောင်းပါ။ Dare to Change - Chip နှင့် Dan Heath (အသံ)
Aသင်တစ်ခုခုပြောင်းလိုသည့်အခါအိမ်၌ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပါ (သင်၏လည်ပတ်ငွေကြေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ၊ စက်ဘီးစီးပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အဖော်ကိုဖိပေးပါ) စသည်တို့သည်မလွှဲမရှောင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ရဲရင့်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း ... ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာကောင်းရှိသော်လည်းပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခုခံတွန်းလှန်ကြသည်။
သို့သျောလညျးကအဲဒီမှာရောက်ရန်လွယ်ကူသည်! အစီအစဉ်တွင်ဤစာအုပ်၌ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာယန္တရားများကိုရှင်းပြရန်ရိုးရှင်းသောအယူအဆ - သင်၏စိတ်ခံစားမှုများ (ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဗီဇသည် ... ) ဆင်တစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏အကြောင်းပြချက်မှာတိရစ္ဆာန်၏နောက်ကျောတွင်မောင်းနှင်နေသောမောင်းသူဖြစ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူသည်ဆင်ကိုရှေ့သို့ချီတက်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသော်လည်းမှန်ကန်သောနည်းလမ်းမရှိပါကမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုအောင်မြင်ရန်ထိရောက်သောအဆင့်သုံးဆင့် -
သင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုခြေရာကောက်ပါ (သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုပြင်ပါ၊ အလေ့အကျင့်များဖန်တီးပါ) ။
များစွာသောဥပမာများနှင့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အတူ - သူရဲကောင်းများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များကိုမလိုအပ်ဘဲလူတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုကသေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခု.
€ 1 မှအသစ် 19,95
€ 19,95 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောက်တိုဘာလ 20, 2020 10:16 pm တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်
အသုံးမကျသောလမ်းပိတ်ဆို့မှုများ - သင့်ကိုဖျားနာစေသည့်ဤအတွေးများ
အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အာဖရိကနိုင်ငံများအား ICC မှနှုတ်ထွက်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်
သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်း - Louise Hay (အသံ)